ဗိုက်ခွဲမွေးတဲ့မိခင်များ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သင့်သလဲ? ဗိုက်ခွဲမွေးထားတဲ့ဒဏ်ရာက ကိုက်ခဲနာကျင်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ? မိန်းမကိုယ် ညှပ်မွေးခဲ့ရသူတွေ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သင့်သလဲ? ကလေးမီးဖွားပြီးစမိခင်တွေ ဘာကြောင့် ဝမ်းချုပ်တတ်သလဲ? ကလေးမီးဖွားပြီးစမိခင်တွေ ဘာကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်တတ်သလဲ? ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုန်းက အကြောပြတ်ရာတွေ ဘယ်တော့ သက်သာမလဲ? ကိုယ်ဝန်ဆောင်တုန်းက တက်လာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ဘယ်တော့ ပြန်ကျသွားမှာလဲ? ကလေးနို့တိုက်မိခင်ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ဆေးလိပ်ကို ရှောင်သင့်သလား? ဖခင်ကောင်းရဲ့ ချစ်ခြင်မေတ္တာဆိုတာ ဘယ်အချိန် ပေါ်လွင်လာမလဲ? မီးဖွားပြီးစမိခင်ဟာ ဘာကြောင့် အကူအညီလိုအပ်နေသလဲ? ကိုယ်ခွဲမရှိတဲ့ မီးဖွားပြီးစမိခင်တွေဟာ ဘာကြောင့် အိမ်သားတွေနဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေရဲ့ အကူအညီလိုသလဲ? မီးဖွားပြီးစမိခင်ဟာ ဘာကြောင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ပံပိုးမှုကို အလိုအပ်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သလဲ? ကလေးမီးဖွားပြီးတဲ့တိုင်အောင် မီးနေသည်ဟာ ဘာကြောင့် ခါးနာ ၊ ဗိုက်နာ ခံစားနေရသလဲ? သားဦးမိခင်တွေဟာ နို့တိုက်ရင်း အဖျားဝင်တတ်သလား? ကလေးပြုစုဂရုစိုက်ဖို့တာဝန်ဟာ မိခင်တာဝန်ပဲလား? မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ကလေးအတွက် ရရှိသော အကျိုးအာနိသင်တွေဟာ ဘာလဲ? မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် မိခင်အတွက် ရရှိသော အကျိုးအာနိသင်တွေဟာ ဘာလဲ? မိခင်နို့လုံလောက်စွာ သောက်စို့ခွင့်မရခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေ ဘာဖြစ်တတ်သလဲ? ကလေးကိုလုံလောက်စွာ နို့မတိုက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ? နို့မှုန့်ဘယ်ကလာတာလဲ? မိခင်နို့နဲ့နို့မှုန့် ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းတယ်လို့ သိသာနိုင်သလဲ? နို့မှုန့်ဟာ တကယ်ပဲ ကလေးငယ်တို့အတွက် အကောင်းဆုံးအာဟာရလား? နို့စို့ကလေးငယ်တွေအတွက် အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်ဟာ ဘယ်အချိန်လဲ? မိခင်နို့ဟာ ကလေးငယ်ကို ဘာကြောင့် လုံခြုံငြိမ်းချမ်းမှု ခံစားစေပါသလဲ? ငွေကြေးမပြည့်စုံလို့ အလုပ်ပြန်ဝင်ရတယ်ဆိုတာ အမြဲမှန်ကန်ပါသလား? အလုပ်ပြန်ဝင်ရတဲ့မိခင်တွေ ကလေးကို မိခင်နို့ ဆက်တိုက်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ? ခဲထားတဲ့နို့ရည်ကို ပြန်နွေးတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? ရုံးမှာ ရေခဲသေတ္တာ သုံးဖို့အဆင်မပြေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? မိခင်၏ နို့သီးခေါင်း နှင့် နို့ဗူးမှနို့သီးခေါင်း တူနိုင်ပါ့မလား? မိခင်နို့ရော ၊ နို့ဗူးရော တိုက်တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက် ဘာသိထားသင့်သလဲ? မီးနေသည်တွေဟာ ဘာကြောင့် အာဟာရချို့တဲ့လာသလဲ? နို့စို့ကလေးငယ်တွေ ဘာကြောင့် အာဟာရချို့တဲ့လာသလဲ? နို့တိုက်မိခင်စားလိုက်တဲ့အစားအစာတွေဟာ နို့စို့ကလေးကို သက်ရောက်စေသလား? နို့တိုက်မိခင်သောက်သုံးတဲ့ ဆေးဝါးအာနိသင်တွေဟာ နို့စို့ကလေးကို သက်ရောက်စေသလား? မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးအာဟာရတွေဟာ ဘာတွေလဲ? ကလေးနို့တိုက်ချိန်မှာ ဘာတွေရှောင်ရမလဲ? မီးနေသည်တွေကို ဘာကြောင့် ထမင်းဆီဆမ်း ၊ ဟင်းခါး ၊ ငါးခြောက်ဖုတ်ပဲ ကျွေးကြတာလဲ? အာဟာရပြည့်ဝစွာမစားတဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေရဲ့ နို့ရည်ဟာ အာဟာရပြည့်ဝစွာ ပါရဲ့လား? နို့တိုက်မိခင်ဟာ အာဟာရပြည့်ဝစွာ စားရမယ့်အပြင် ဘာလိုအပ်သလဲ? မိခင်ပဲစားရင် ကလေးဝမ်းသက်ပါသလား? ကလေးအမေဖြစ်သူ သရက်သီးစားလို့ ၊ မုန့်ဟင်းခါးစားလို့ နို့စို့ကလေး ဝမ်းသွားတတ်ပါသလား? နို့တိုက်မိခင်ဝမ်းသွားနေရင် ကလေးကို နို့ဖြတ်ထားသင့်သလား? သရက်သီး ၊ သင်္ဘောသီး ၊ မုန့်ဟင်းခါး စတာတွေဟာ ဝမ်းသွားစာတွေလား? မိခင်က ကြက်ဥစားရင် ကလေးဝမ်းကိုက်တတ်သလား? ကြက်ဥ ၊ ဘဲဥ ၊ ငုံးဥ နဲ့ ဥအမျိုးမျိုးအနက် ဘယ်ဥက အားအဖြစ်ဆုံးလဲ? ဥကို အစိမ်းသောက်လျှင် ပိုအားရှိသလား? ဥမှာ အကာနဲ့အနှစ် ဘယ်ဟာကပိုအားရှိသလဲ? မြန်မာကြက်ဥနဲ့ မွေးမြူရေးကြက်ဥ ဘယ်ဥက ပိုလို့ အားဖြစ်စေသလဲ? လိပ်ဥ ၊ လိပ်သားစားရင် အနာကြီးရောဂါဖြစ်တတ်သလား? ကြက်ပြုတ်ရည်နဲ့ ကြက်သား ဘယ်ဟာကပိုအာဟာရပြည့်မလဲ? Chicken Essence လို့ခေါ်တဲ့ (ကြက်ပေါင်းရည်ပုလင်း)ဆိုတာ ဘာလဲ? ကလေးကို ဂလူးကို့စ်တိုက်လို့ အားပိုဖြစ်သလား? သိတဲ့အတိုင်းကျင့်ဖို့ဆိုရင် ဘာလိုအပ်နေသေးလဲ? အယူအဆအမှားတွေကို ဘယ်လိုတိုက်ထုတ်ရမလဲ?
မီးနေသည်နှင့် မိခင်များ နဲ့ ပတ်သက်လို့ CHAT Room မှာ ဝိုင်းဆွေးနွေးမယ်။
ပြီးရင် မီးနေသည်နှင့် မိခင်များ နဲ့ပတ်သက်လို့ အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးဖို့ ဒီပေ့ခ်ျကို ပြန်လာရပါမယ်။